ခြေဖနောင့်နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ… – Tameelay
အင်ဂျင်တလုံးပျက်သွားတဲ့ လေယာဉ်ကုို ရဲရင့်စွာထိန်းကြောင်းပြီး ဆင်းသက်ပေးနုိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှူး
၆ လသမီးအရွယ်က မွေးစားထားခဲ့တဲ့ ၅ တန်းကျောင်းသူကို မွေးစားသူက ၇ ကြိမ်မြောက်ပြုကျင့်နေစဉ် အဒေါ်နဲ့ ပက်ပင်းမိ
ခြေဖနောင့်နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ…
ခြေဖနောင့်နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းများမှာ…..
၁။ ဖနောင့်ကြောနှင့် အရွတ်ပြားမှာ ထိခိုက်မိခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း။
၂။ ဖနောင့်ရိုးပင်ကိုက နောက်ဖက်မှာချွန်၍ မြင့်တက်နေခြင်း၊ ထိုအခြေအနေကို ဆေးဝေါဟာရ (Haglund’s Calcaneum) လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။
ဤအခြေအနေတွင် အရွတ်တွေ ဒဏ်ရာရလွယ်စေပါတယ်။
၃။ ခြေဖ၀ါးခွက်လွန်းသည့်အနေအထားမှာ လမ်းလျှောက်များလွန်းခြင်း၊ အရပ်များလွန်းခြင်းကြောင့်လဲ ဖနောင့်အောက်ပိုင်းနှင့်နောက်ပိုင်း နာစေတတ်ပါတယ်။
၄။ Spondy arthritis လို့ခေါ်သော အရိုးအဆစ်ရောင်သည့် ရောဂါကြောင့်လဲ လူငယ်လူရွယ်တိုင်းမှာ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
၅။ လူကြီးလူငယ်မရွေး အများဆုံးဖြစ်စေတတ်တာမှာတော့ Calcaneal Spur လို့ခေါ်သော ဖနောင့်ရိုးမှာ ကျီးပေါင်းတတ်ပြီး အတက်ကလေးထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဖနောင့်သားကြေခြင်း၊ အသားမျှင်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူ့အလိုလိုဖြစ်နိုင်သလို အမြင့်ကခုန်ချခြင်းလိုမျိုး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့လျှင် တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ရောဂါလက္ခဏာတွေမှာ
၁။ အိပ်ရာနိုးစ၊ ထိုင်နေရာမှ မတ်တပ်ရပ်စမှာ ထူးထူးခြားခြားနာကျင်၍ လမ်းလျှေက်လို့သွေးပူလာသည့်အခါ နာကျင်မှုလျော့ပါးသွားခြင်း
၄။ ဖနောင့်အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်းတွေတွင် အနည်းငယ်ရောင်ရမ်းနေတတ်ခြင်း
၆။ လက်နှင့်ဖိကြည့်၊ ထောက်ကြည့်သည့်အခါ နာကျင်ခြင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သက်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမှာ ကုလားထိုင်မှာထိုင်ရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖနောင့်မရွေ့စေဘဲ ခြေချောင်းလေးတွေကိုကွေးပေးခြင်း၊
ကော့ပေးခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းကို အကြိမ် ၂၀၊ ၃၀ လောက်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။…
Credit : Original
ခွဖေနောငျ့နာခွငျး၊ အောငျ့ခွငျးကိုဖွဈစနေိုငျတဲ့ အကွောငျးမြားမှာ…..
၁။ ဖနောငျ့ကွောနှငျ့ အရှတျပွားမှာ ထိခိုကျမိခွငျး၊ ဒဏျဖွဈခွငျး။
၂။ ဖနောငျ့ရိုးပငျကိုက နောကျဖကျမှာခြှနျ၍ မွငျ့တကျနခွေငျး၊ ထိုအခွအေနကေို ဆေးဝေါဟာရ (Haglund’s Calcaneum) လို့လဲ ချေါပါတယျ။
ဤအခွအေနတှေငျ အရှတျတှေ ဒဏျရာရလှယျစပေါတယျ။
၃။ ခွဖေဝါးခှကျလှနျးသညျ့အနအေထားမှာ လမျးလြှောကျမြားလှနျးခွငျး၊ အရပျမြားလှနျးခွငျးကွောငျ့လဲ ဖနောငျ့အောကျပိုငျးနှငျ့နောကျပိုငျး နာစတေတျပါတယျ။
၄။ Spondy arthritis လို့ချေါသော အရိုးအဆဈရောငျသညျ့ ရောဂါကွောငျ့လဲ လူငယျလူရှယျတိုငျးမှာ ဖွဈစတေတျပါတယျ။
၅။ လူကွီးလူငယျမရှေး အမြားဆုံးဖွဈစတေတျတာမှာတော့ Calcaneal Spur လို့ချေါသော ဖနောငျ့ရိုးမှာ ကြီးပေါငျးတတျပွီး အတကျကလေးထှကျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
၆။ ဖနောငျ့သားကွခွေငျး၊ အသားမြှငျရောငျရမျးခွငျးကွောငျ့လဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သူ့အလိုလိုဖွဈနိုငျသလို အမွငျ့ကခုနျခခြွငျးလိုမြိုး ထိခိုကျဒဏျရာရမှုကွောငျ့လဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ထိုကဲ့သို့ဖွဈလာခဲ့လြှငျ တှရေ့လရှေိ့သညျ့ ရောဂါလက်ခဏာတှမှော
၁။ အိပျရာနိုးစ၊ ထိုငျနရောမှ မတျတပျရပျစမှာ ထူးထူးခွားခွားနာကငျြ၍ လမျးလြှကျေလို့သှေးပူလာသညျ့အခါ နာကငျြမှုလြော့ပါးသှားခွငျး
၄။ ဖနောငျ့အတှငျးပိုငျး သို့မဟုတျ အပွငျပိုငျးတှတှေငျ အနညျးငယျရောငျရမျးနတေတျခွငျး
၆။ လကျနှငျ့ဖိကွညျ့၊ ထောကျကွညျ့သညျ့အခါ နာကငျြခွငျးစတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။
သကျသာအောငျပွုလုပျနိုငျသညျ့နညျးလမျးမှာ ကုလားထိုငျမှာထိုငျရငျး ကွမျးပွငျပျေါမှာဖနောငျ့မရှစေ့ဘေဲ ခွခြေောငျးလေးတှကေိုကှေးပေးခွငျး၊
ကော့ပေးခွငျး လကေ့ငျြ့ခနျးကို အကွိမျ ၂၀၊ ၃၀ လောကျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။…
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေဖို့ဆိုရင် ကနေ့မှစပြီး ဒီအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ .
သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေဖို့ဆိုရင် ကနေ့မှစပြီး ဒီအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . 1. ရေများများသောက်ပါ 2. မနက်စာကို ဘုရင်လိုစား၊ နေ့လည်စာကိုတော့ မင်းသားလေးလိုစား၊ ညစာကိုတော့သူတောင်းစားလို စားပါတဲ့။ (အားလုံး နားလည်ကြမှာပါနော်) 3. သစ်ပင်ပေါ်က ရတဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးပါ၊ 4. ဘ၀မှာ …
မြန်မာအခေါ် ဒရင်ကောက်ပင်( fiddlehead) ဆိုတာ နူးညံ့ပြီး အရွက်ရဲ့ထိပ်မှာ အခွေအလိပ်သ လေးရှိတဲ့ ဖန်းပင်တစ်မျိုးပါ ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံက ကြိုးတပ်တူရိယာတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ (ဥပမာ-တယော) ရဲ့ ထိပ်ဆုံးက အဆင်တန်ဆာလေးနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သူ့ကို အစို့အညှောက်လေးတွေ ထွက်ခါစမှာ ခူးယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။နွေဦးရာသီအစမှာ ဒရင်ကောက်ပင်တွေကို ပေါပေါများများ …
လိုင်ချီးသီးကိုစားပေးခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ နဲ့ လိုင်ချီးသီး အမျိုးအစား…
တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကတည်းက စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး အဲဒီကနေတဆင့် ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ ဗီယက်နမ်တို့မှာလည်း စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။ အသီးက သိပ်ကိုကဗျာဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလို့ စားသုံးတဲ့သူတွေ အကြိုက်များတဲ့ အသီးမျိုးပါ။ ပါဝင်တဲ့ အဟာရဓါတ်တွေ လိုင်ချီးသီးမှာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ လိုင်ချီးသီး ၁ ခွက် …
လူကလေးရောင်းတယ် ၄ လ သမီးလေး ၄သိန်းကျပ်တဲ့..
ဇနီးသည်ကို ချစ်တတ်တဲ့ ခင်ပွန်းတွေမှာ ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေ ရှိလာကြတယ်
ခင်ပွန်းကို ချစ်တဲ့ ဇနီးသည်တွေ…ပိုင်ဆိုင်ကြရတဲ့အရာ
ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ ဇဏ်ခီရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြခဲ့တဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ
“ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်ရာထူးမှနုတ်ထွက် “
ခေတ်လေး နဲ. သစ်လေး ဗီဒီယိုတွေ အများကြီးနော် … ကြည့်လိုက်အုံး
အမြန်လမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ်မီးလောင်ကာ လူရှစ်ဦးသေဆုံးမှု ယာဉ်မောင်းကို အမိန့်ချလိုက်ပြီ
နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြန်လည်ရွေးချယ်မည်